युद्धको १ महिना बितेलगत्तै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले गरिदिए यस्तो घोषणा — Sanchar Kendra
युद्धको १ महिना बितेलगत्तै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले गरिदिए यस्तो घोषणा
एजेन्सी। युक्रेनी राष्ट्रतिको पछिल्लो अभिव्यक्तीले सिंगो युरोपमा डर बढाएको छ। रुसको आक्रमण युक्रेनमात्रै सीमित नहुने भन्दै राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा राष्ट्रसँग थप सैन्य सहयोगको माग गरेका हुन्।
उनले अमेरिका तथा युरोपियन युनियनसहितका पश्चिमा राष्ट्रसँग युक्रेनका लागि युद्धक विमान माग गरेका हुन्। जेलेन्स्कीले भनेका छन्, रुसी आक्रमणबाट सुरक्षाको मूल्य के हो ? त्यसको स्पष्ट जवाफ छ।
युक्रेनका लागि युद्धक विमान, ट्यांक, एन्टी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली हुन्, त्यसको जवाफ या मूल्य। हामीलाई एन्टी–सिप हतियार चाहिएको छ। यी हतियार हाम्रा साझेदारसँग छन्। ती हतियार उनीहरुका गोदाममा धूलो लागेर बसेका छन।
यहाँ हामीलाई हाम्रो रक्षाका लागि चाहिएको छ’ युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनेका छन्।युक्रेनमात्रै नभएर बाल्टिक क्षेत्रका देशहरु नै रुसी आक्रमणको निशानामा आएको उनले बताए। जेलेन्स्कीले भनेका छन।
पोल्याण्ड, स्लोभाकिया र पूर्वी युरोप नै रुसी आक्रमणको निशानामा छ र यो स्वीकार्य हुनु हुँदैन कसैका लागि पनि। पश्चिमा राष्ट्रको सैन्य गठबन्धन नेटोसँग रहेका ट्यांक र लडाकु विमानमध्ये युक्रेनलाई एक प्रतिशतमात्रै भए पुग्ने जेलेन्स्कीले बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘हामीले धेरै मागेका छैनौँ र माग्ने पनि छैनौँ। हामीले ३१ दिन पर्खिसकेका छौँ।’युक्रेनले पश्चिमा राष्ट्रसँग लगातार लडाकु विमानको माग गर्दै आएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी २४ देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ।
जसका कारण एक करोडभन्दा बढी युक्रेनी आन्तरिक वा बाह्य रुपमा विस्थापित भएका छन्। तेस्तै महिनादिन बित्दा समेत सफलता हात नलागेपछि रुस अर्कै तयारीमा जुटेको खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
रुसले युक्रेनमा आफ्नो आक्रमणको अबको निशाना पूर्वी क्षेत्र हुने बताएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले पूर्वी क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र’ बनाउनु अबको रणनीति हुने उल्लेख गरेको हो।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले युद्धको प्रारम्भिक लक्ष्य पूरा भएको दाबी गरेको छ। युक्रेनको सैन्य क्षमता कम गरेको र त्यसले युद्धको पहिलो लक्ष्य पूरा भएको दाबी रक्षा मन्त्रालयले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
रुसले गएको फेब्रुअरी २४ देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। उसले केही दिनभित्रै युक्रेनमा प्रमुख सहर कब्जामा लिने लक्ष्य बनाए पनि त्यसमा सफल हुन सकेको छैन।
युक्रेनी सुरक्षा बलले कडा प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। कतिपय स्थानमा रुसी सैनिकलाई हटाउन पनि सफल भएका छन्। तर रुसले भने युद्धको महिना दिन पुगेपछि आफ्नो प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको भन्दै युद्धको रणनीति परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको हो।
रुसी जनरल स्टाफका प्रमुख सर्गेइ रुड्स्कोले भनेका छन् युद्धको पहिलो चरणको काम पूरा भएको छ। युक्रेनी सैनिकको क्षमता निकै कम भएको छ। यसले हामीलाई डोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सहयोग गरेको छ।
रुसले लगातार युक्रेनको राजधानी किएभसहितका प्रमुख सहरलाई निशाना बनाएर गोलाबारी गर्दै आएको छ। रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सेना कमजोर भएको दाबी गरे पनि रुसले नै ठूलो क्षति बेहोरेको बताइन्छ।
रुसले युक्रेन युद्धमा आफ्नो प्रमुख लक्ष्य अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई ‘निशस्त्रीकरण’ तथा ‘डिनाजिफाइ’ नाजी मुक्त पार्नका लागि युद्ध गरिएको बताउने गरेका छन्।
उनले युक्रेनको नेतृत्वलाई नवनाजी भन्ने गरेका छन्। तर उनको आरोपअनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति नाजी होइनन् बरु उनी नाजीबाट पीडित यहुदीका सन्तान हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी जेठी छोरीमाथि अर्को ठूलो बज्रपात भएको छ।
त्यस्तै पुटिनकी जेठी छोरी डा. मारिया वोरन्तसोवा (३६) को विवाह टुटेको डेली मेललेजानकारी दिएको छ। यो खबर त्यतिबेला आएको हो जब पुटिन युक्रेनसँग युद्धको विषयमा लगातार चर्चामा छाइरहेका छन्।
ग्ल्यामरस डा. भनेरसमेत चिनिने मारिया, रसियाली राष्ट्रपति जासुसको रुपमा काम गरिरहेका बेला जन्मिएकी थिइन्। उनी बालबालिकामा हुने दुर्लभ आनुवंशिक रोगकी विशेषज्ञ हुन्। जानकारीका अनुसार मारियाले आफ्ना डच व्यापारी श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भएको छ।
यी दुईका दुई सन्तान छन्। निर्वासित रुसी खोज पत्रकार सर्गेई कानेभले युक्रेनसँगको युद्धका कारण पुटिनले ‘आफ्नी जेठी छोरीको लागि असाध्यै खराब काम गरे’ भनेका छन्। उनले खुलासा गर्दै भने, ‘सेन्ट पीटर्सबर्ग नजिकैको अत्याधुनिक मेडिकल सेन्टर निर्माणको मेगा–प्रोजेक्टमा,
उनको अत्यधिक सेयर छ। उक्त योजनाको उद्देश्य भनेको युरोप र पर्सियन गल्फ देशका धनाढ्य शिखलाई आकर्षित गर्नु थियो। र अहिले, युक्रेनमाथिको आक्रमणपश्चात् कस्ता खालका युरोपियन र सिख आउलान् त ?
क्रेमलिनमा हुने गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धि सामग्री प्रकाशन गरेपछि प्रतिबन्धित भएको द इन्साइडरका निर्वासित सम्पादक रोमन दोब्रोखोतोभले पनि आफ्नो सोसल मिडियामा पुटिनकी छोरी आफ्ना डच व्यापारी श्रीमान् जोरिट फासेनसँग छुट्टिइसकेको जानकारी दिए।
उनले यी दुईको कहिले सम्बन्धविच्छेद भयो भनेर थप जानकारी भने दिएनन्। यद्यपि, युद्ध सुरु हुन अघि यी दुई छुट्टिएको बताइन्छ। पुटिनले कहिल्यै पनि आफ्ना सन्तान र उनीहरुको नीजि जीवनबारे कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्।
रुसको बेलगार्डमा विस्फोट हुंदा, तीन जनाको ज्यान गयो
मणिपुरमा भिषण पहिरो- २५ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता
साउदी अरबको शक्ति बढाउनका लागि युवराजको घोषणा
‘पुटिन महिला भएको भए यस्तो गर्दैनथे’, बोरिस जोनसनको भनाइमा, पुटिनको जवाफ
अफगानका ५ लाख नागरिक घरबारविहीन हुनसक्ने